TAARIIKHDA MAANTA: | DAABACADA WARKA: September 20, 2002
Waa warka madax diisii.
1.Hawlgalo milatari ooy si wada jir ah uqaadeen CWXO iyo Ciidanka Xoraynta Oromia
2.Malise Zenawi oo Faragalin siyaasadeed kusamayn doona xisbiga SEPDF
3.Ciidamo Itoobiyaan ah oo kusugan Magaalada Baydhabo
4.Madax waynaha DKMG ah ee Somalia oo marke baaq usoo jeediyay Dalka Maraykanaka
5.Taliyaha Ciidanka Jabuuti oo socdaal kumaraya Dalalka Farnsiiska iyo Jarmalka. �
1. Hawlgalo milatari ooy si wada jir ah uqaadeen CWXO iyo Ciidanka Xoraynta Oromia.
Hawlgalo milatari ooy si wada jir ah uqaadeen Ciidanka wadaniga Xoreenta Ogaadeenya iyo Ciidanka Xoreenta Oromiya ayaa si ba,an loogu jabiyay Ciidanka Cabudhiska Gumaysiga Itoobiya.
Ciidamada Geesiyiinta JWXO iyo Ciidamada Xorenta Oromiya ayaa 13.09.2002 weerar ku qaaday fadhiisimo ay Ciidamada Cabudhiska Gumaysatada Itobiya ku lahaayeeyn meel xaga waqooyi kaxigta Magaalada harar.
Ciidamada Cagajiidka ah ee Gumaysiga Itoobiya ayagoo adeegsanaya Diyaaradaha dagaalka�� waxaa dagaalkaas lagaga dilay 60 Askari ayadoo lagaga dhaawacay 90 Askari oo kale, waxaana Goobtaas lagaga furtay Hub iyo saanad aad u fara badan.
Iskaashiga labadan ciidan ee Gobanima doonka ah ayaa waxuu Ciidamada NacabkaGumaysiga Itoobiya ku riday, Niyad jab, Burbur, kala,amarqaadasho la,aan, iyo baxsad ay baxsadaan. �
2. Malise Zenawi oo Faragalin siyaasadeed kusamayn doona xisbiga SEPDF.
Wararka naga soo gaadhaya xafiiska kaligii Taliye Meles Zenaawi ayaa sheegaya in uu dhowaan ka bilaabi doono xisbiga SEPDF Faragalin weyn oo uu kagasaari doono xubno sar sare oo ka tirsan Golaha Dhexe ee xisbiga SEPDF iyo guddiga fulinta ba.
Xisbiga SEPDF oo ah Xisbiga Isutaga qowmiyadaha koonfureed ee Itoobiya, ahna xisbiga� ay TPLF tu u sameeysay Qowmiyada Sidaamo kana mid ah isbahaysiga EPRDF ee ay TPLF tu hogaamiso, ayaa hada qarka usaaran in uu burburo, kadib markii ay xubno badan oo xisbiga katirsan kasoo horjeedsadeen Siyaasada qalafsan ee uu kudhaqmayo kaligii taliye Malise Zenawi, ka dib xasuuqi ka dhacay magaalada Awassa bishii May ee sanadkan aan kujiro.
Sidaan ognahay, Waxaa itoobiya beesha caalamka kaga yimid, culeys weyn oo ah inay sharciga horkeenaan dadkii ka dambeeyay xasuuqii Awassa oo ay ku dhinteen boqolaal ruux oo rayid ah. Iyada ooy xaqiiqdu tahay in ciidanka u taba baran cubudhinta iyo cadaadinta Shucuubta dulaman ee ka amar qaata Zenawi ay gaysteen xasuuqaas, ayuu doonayaa in uu ceebta kula galgasho xisbiga SEPDF oo uu markii horaba u samaystay Cadaadinta Shacabka siidaamo . waxaa haawshaa fulinteeda loo xilasaaray Abaye Tsefaye oo ah wasiirka federaalka iyo Dr. Kasu Ilala oo ah wasiirka dhismaha kana soo jeeda qowmiyadda Sidaamo. �
� 3.Ciidamo Itoobiyaan ah oo kusugan Magaalada Baydhabo.
wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in ay halkaa kusuganyihiin ciidamo Itoobiyaan ah oo la soo noqday Korneel Maxamed Nuur Shaati Guduud, ka dib markii looga yeedhay magaalada Doolow si loo siiyo amara cusub.
Ciidankaas ayaa wata gawaadhida Tignikada loo yaqaano iyo hub fudud. Ujeedada ciidankaas loo keenay Baydhabo ayaa lagu sheegay in ay ahayd, Itoobiya oo kacabsi qabta in qaar kamid ah raga ay shaati guduud is hayaan ay taageero kahelaan DKMG ah.
4.Madax waynaha DKMG ah ee Somalia oo markale baaq usoo jeediyay Dalka Maraykanaka iyo Beesha Caalamkaba
Madaxweynaha dowladda ku meel gaadhka Soomaaliya ayaa mar labaad Todobaadkii hore dhamaadkisii� oogu baaqay dalka mareykanka in ay dowladiisa gacan ka siyaan dhinaca la dagaalanka argagixisada oo sida u sheegay madaxweyne C/qaasim saldhig ka dhigan kara Somalia hadii aan DKMG ah la tageerin.
Madaxweyne Cabdiqaasim waxuu sidoo kale beesha caalamka oogu baaqay in ay ciidamo keenaan soomaliya si hubka looga dhigo kooxaha Dagaal-oogayaasha ee� uu u macaanaday daadinta dhiiga shacabka Soomaliyeed, ku waas oo qaar ka mid ah Gacan ay siiso� Xukuumada Itoobiya.
Waa markii labaad uu madaxweyne cabdiqaasim dalka mareykanka iyo beesha caalamkaba u muujiyo khatarta ka imaan karta kooxo argagixiso oo soomaliya saldhig kayeesha hadii aan gacan la siinin dowladda soomaliyeed.
Dhinaca kale Ra,iisal wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Abshir iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka Mudane Cabdala deroow Isaaq ayaa Booqashooyin ku� kala tagay dalalka Sacuudiga, Yamen, Ciraaq� Suuriya iyo Imaaraadka Carabta. Labad masuul iyo Wafuuday hogaaminayeen ayaa waxay kulamo layeesheen masuuliyiinta wadamadaas ay soo booqdeen, .Waxaana lafilayaa markay booqashadan soo gaba gabeeyaan in ay isu diyaarin doonaan shirka dib uheshiisiinta ee dhawaan ka dhici doona wadanka kenya.
7. Taliyaha Ciidanka Jabuuti oo socdaal kumaraya Dalalka Farnsiiska iyo Jarmalka.
Taliyaha ciidanka militariga Jabuutil Generaal Fatxi Axmed Xuseen oo hogaaminaya wafdi ka socda wasaarada gashandhiga jabuuti oo ka kooban 9 xubnood ayaa habeenkii axada ee 15 kii bisha Septembar ka ambabaxay dalka Jabuuti isaga oo ku siijeeday dalalka faransiiska iyo germalka.
Waxaa la filayaa in Generaal ka iyo wafdigiisa ay dalka kamaqnaan doonaan mudo 1 todobaad ah iyaga oo ku hor maraya dalka faransiiska kadib na aadaya dalka Jarmalka.Wafdigaan ayaa la kulmi doona sarakiil sar sare oo ka tirsan ciidamada labadaas dall ooy ka wada hadli doonaan arrimo la xidhiidha la dagaalanka argagixisada iyo ciidamada germalka iyo faransiiska oo haatan ku sugan xeebaha dalka Jabuuti.
radioxoriyo@aol.com | radioxoriyo@ogaden.com
Xusuus:� Radio Xoriyo waxaad ka dhegaysan kartaa Mawjadda 19 MB ee dhererkeedu yahay� 15580 KHZ, Maalmaha Talaadada iyo Jimcaha 7: 30PM waqtiga Afrikada� Bari.